Wararkii ugu dambeeyay xaaladda degmada Afgooye oo shalay ay dagaal culus ka dhaceen – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wararkii ugu dambeeyay xaaladda degmada Afgooye oo shalay ay dagaal culus ka dhaceen
Wararkii ugu dambeeyay ee saakay laga helaayo degmada Afgooye ee gobolka Sh/hoose ayaa sheegaya in xaaladda degmadaasi ay haatan tahay mid aad u degan, kadib dagaal muddo saacado ah socday oo maalintii shalay ka dhacay qeybo ka mid ah degmadaasi.
Dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab ayaa maalintii shalay muddo saacado ah la wareegay gacan ku haynta qeyb ka mid ah degmada Afgooye, kadib markii ay weerar gaadmo ah halkaasi kusoo qaadeen.
Mas’uul ka tirsan maamulka degmada Afgooye oo aynu qadka teleefanka kula xiriirnay ayaa inoo xaqiijiyay in gebi ahaan degmadaasi laga saaray dagaalyahanadii Al-shabaab ee shalay weerarka kusoo qaaday.
Mas’uulkaasi ayaa sidoo kale inoo sheegay in dagaalkii shalay uu geystay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Ilaa 10 qof oo isugu jira dhinacyadii halkaasi ku dagaalamay iyo dad shacabka ayaa ku geeriyooday dagaalka, waxaana dadkii geeriyooday ku jiray haweeney ganacsato ahayd oo si weyn looga yaqaanay degmadaasi.
Sidoo kale, tiro dad kale ayaa la sheegayaa inay ku dhaawacmeen dagaalkaasi, waxaana dhaawacooda haatan lagu daaweynayaa xarumaha caafimaad ee ku yaala degmada Afgooye.
Dhinaca kale, ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa la sheegayaa inay saakay baaritaano aad u xoogan ka wadaan xaafadaha ay ka kooban tahay degmada Afgooye.
Si kastaba ha ahaatee, weerarkii shalay ee degmada Afgooye ayaa noqonayaa kii labaad oo ay dagaalyahanada Al-shabaab muddo bil gudaheed ay kusoo qaadaan degmadaasi, islamarkaana ay muddo saacado ah la wareegaan qeybo ka mid ah degmadaasi.